उमेर बढ्दै गएपछि यौन इच्छामा किन कमी आउँछ ? यस्तो छ कारण — Sanchar Kendra
उमेर बढ्दै गएपछि यौन इच्छामा किन कमी आउँछ ? यस्तो छ कारण
जति जति उमेर ढल्कदै जान्छ, महिलामा यौन इच्छाको कमी हुँदै जान्छ । उनीहरु यौनमा उदासिन हुन थाल्छन् । हुन त शरीर बुढो भएपनि मन बुढो हुँदैन भनिन्छ । यौन इच्छा एक मानसिक अवस्थामा पनि निर्भर गर्ने कुरा हो । भलै यसमा शरीरले प्रभाव पारेपनि यौन इच्छा मनसँग बढी निकट छ । त्यसैले बुढो हुँदैमा यौन शक्ति घट्न सक्छ तर यौन इच्छामा कमी आउँदैन भन्ने आम धारणा छ ।
यद्यपि अधिकांश महिलाहरु उमेर बढ्दै जान्दा शारीरिक सम्बन्ध बनाउन रुची राख्न छाड्छन् । अर्थात उनीहरुलाई यौनमा रुची घट्न थाल्छ । किन होला ? यसमा केही कारण छन् । जस्तो कि, उमेर ढल्किएपनि उनीहरुसँग पार्टनर हुँदैनन् । उनीहरु विधवा भएका हुनसक्छन् । त्यस्तै रजोनिवृत्तिसँग सम्बन्धित लक्षण, पार्टनरको खराब स्वास्थ्य र तनावग्रस्त सम्बन्ध ।
यस अध्ययनमा रजोनिवृत्तिपछि महिलाको त्यस विषयमा निरिक्षण गरिएको थियो कि कुन किसिमको सम्बन्धमा घनिष्ठता, स्वास्थ्य र मनोवैज्ञानिक कारणले यी महिलाको यौन-अन्तरंग प्रभावित गर्छ ?
फ्युबियनले भनेका छन्, ‘यसबाहेक रजोनिवृत्ति सम्बन्धी समस्या जसतो कि शरीरको आन्तरिक भागमा सुख्ापान र सम्बन्ध बनाउँदा हुने पीडाले पनि यौन गतिविधिलाई प्रभावित बनाउँछ ।’
रजोनिवृत्तिपछि हुने मनोसामाजिक परिवर्तन यसको मूख्य कारण देखिएको छ । यसमा शरीरको बनावटदेखि अधिक सचेत हुनु, आत्मविश्वा र कथित वान्छनीयता, तनाव, मुडमा परिवर्तन र सम्बन्धसँग सम्बन्धित मुद्दा सामेल छन् ।
को हुन् ६ जनाको ह’त्या गर्ने लोकबहादुर ? फिल्मी शैलीमा यसरी गरेका रहेछन ह’त्या ?
के तालिवानले पञ्जशीर पनि कब्जा गरेको हो ?
नेपाल लाईफका शेयर धनीलाई खुशीको खबर, अब शेयर दोब्बर हुने